Medjugorje: ihe ato ndi nne anyi di aso na-akuziri anyi | EKPERE NA OZI
Medjugorje: ihe ato Nwanyi anyi kuziri anyi
Paolo Tescione	Edere ya Julaị 7, 2020 Julaị 7, 2020
A nam ario Gi o, abia ma oburu na ichoghi ka edoro gi ya n’amara. Biko abiakwala ma don't kweghi ka Nwanyi anyi kuziere gi. O diri gi nma! Ọ kaara Chọọchị mma. Nwaanyị anyị ekwughi "gụgharịa" Rosary. Mana o kwuru "KPỌRU NRỌ". A na-agụghị ekpere. Biko were obi gi mee.
Ọ BR YOU na DH DR LO N’AKA N’AGH YOUGH YOU EKPERE
Ọ bụrụ na ahụghị m n'anya, enweghị m ike ikpe ekpere. Saint Paul dere, "Mmụọ Nsọ na-ekpe ekpere n'ime anyị, na-ebi n'ime anyị, hụrụ anyị n'anya". Ọ bụrụ na ahụghị m n'anya, enweghị m mmụọ nsọ, mmụọ adịghị. Abụ m Setan, dị ka Jizọs gwara Pita. Ọ bụrụ na m kpọrọ mmadụ asị, enweghị m ike ikpe ekpere; ọ bụrụ na ajụrụ m mmadụ, enweghị m ike ikpe ekpere. Nke a bụ iwu maka ikpe ekpere na ịhụ n'anya. Ekem: ima ọtọn̄ọ ke idemfo. Ma oburu na inabata onwe gi dika odi gi, igaghi anabata di gi. Ma oburu na ihughi gi uto na ihu gi, ya na physiognomy gi, kedu ka isiri si "a dighi m gi nma" Anyị niile mara mma ma ọ bụrụ na anyị maara ka anyị ga-esi hụ n'anya. Ozugbo, anyị na-adọ ndị na-ahụghị n'anya aka na ntị Chọghị etemeete n'anya! Lovehụnanya dị mkpa maka ịdị ndụ. You nwere ike ịhụ onwe gị n'anya? Ma ihu-n'anya di anya n’ebe di anya n’ebe Jehova nọ. Chineke bu ihunanya. Enweghi uzo ozo. Maka nke a Nwanyị nwanyị anyị kwuru "ka enwere ike ịhụ Jizọs n'anya, ị ga-ahụ onwe gị n'anya". O buru na i huru onwe gi n’anya, i maghi etu i huru Jisos n’anya, Onyenwe anyi enyewo gi ihe niile. Hụghị n'anya. Kedụ ka ị ga-esi bịa ụka ka gị na ndị ụka wee kpee ekpere, jiri onwe gị chụọ àjà maka Nzukọ-nsọ ​​na ekpere gị ma ọ bụrụ na ị maghị etu esi ahụ n'anya ma ghara ikpe ekpere? Yabụ na ị gaghị ekpe ekpere. Site na anụ ahụ ị nwere ike ịme ihe. Ọ bụrụ na ịnweghị obi, ị bụ osisi naanị nke nwere akwụkwọ osisi mana onweghị mkpụrụ. Ọ bụ ya mere e nwere Ndị Kraịst na-aga chọọchị, ndị na-agụ ma ha anaghị amị mkpụrụ; ha kwuzie na odighi uru ileta uka. Nke a na-eme n'ihi na ha achọghị ịhụ n'anya, ha achọghị ịmị uche Chineke, ọ bụ ihe dị oke egwu na ọdịnala ndị Kraịst na Oziọma. Nwaanyị anyị chọrọ ịkụziri gị ihe. For bụụrụ ya “nwa nwuo,” onye ghagide ido onwe ya n'okpuru ma na-eto eto. Asịla: Enweghị m ike ikpe ekpere n'ihi na ụjọ na-atụ m. Onye Kristian ekwesighi ikwu nke a ..
GADKWU BA BIBB VL KWURU Ọ B.
Nwaanyị anyị gwara anyị na anyị ga na-agụ Akwụkwọ Nsọ ọtụtụ (ya bụ, maka ha Agba Ọhụrụ) maka na ekpere na-enye akwụkwọ nsọ. Nwaanyị anyị sịrị gbanyụọ TV ma mepee Baịbụl. Anyị na-enwe ike ịnọ awa ole na ole n'ihu TV; anyị na-enwe ike ịzụta akwụkwọ kwa ụbọchị, anyị na-enwe ike iji ọtụtụ awa soro ndị enyi anyị kparịta ụka. Mgbe ahụ ọ bụrụ na m hụ ma ọ bụ gụọ banyere egwuregwu, ana m ekwu banyere egwuregwu. Ọ bụrụ na m gụọ ma hụ ọgwụ, m ga na-ekwukarị gbasara ọgwụ. Ọ bụrụ na ị gụrụ Bible n’ime ezinụlọ gị, ọ pụtara na Chineke kwuru okwu. Mgbe Akwụkwọ Nsọ na-anọ n’obi gị, ị na-eche dịka Jizọs, you ga -eme onwe gị ka ọkpara Chineke, dịka nwa nke Chukwu ị nwere ike ikpegara ya ekpere. N'ime Akwụkwọ Nsọ, enwere Onyenwe anyị dị ndụ. Eji Mm] Ns] kpuchie okwu niile nke Ba ,b ,l, edoro ns], n'ike mmuo. Gaghi eji anya gi gụọ Baibul. Mgbe ozioma gasịrị, onye ụkọchukwu suturu Akwụkwọ Nsọ ọnụ, ma ọbụghị mpempe akwụkwọ ahụ, kama susuo Onye-nwe dị ndụ, onye kwuru okwu.
Akwụkwọ nke Jehova dị ka uwe Chineke, akwa nke Chineke kpuchie ya. Gị onwe gị, ijide Akwụkwọ Nsọ, ị ga-enwe obi obi Chineke ike, na-atụgharị obi Nna-ukwu gị, obi Chineke dị ndụ. Ọ bụ okwu na-enyere gị aka. N’ezie, Jizọs kwuru na “onye ọ bụla nke na-ege ntị n’okwu m anaghị eje ije n’ọchịchịrị, kama ọ ghọtara ebumnuche ya, nzube ya.” Ndị knowtali maara otu esi agụ onye ọ bụla. Ọbụghị otu ndị ụlọ ụka m, ọtụtụ ndị okenye enweghị ike ịgụ akwụkwọ maka na ogologo oge ka ndị obodo anyị bụ ohu site na ndị na-ekweghị Ndị Kraịst ịga ụlọ akwụkwọ; naanị ma ọ bụrụ na ha ghọrọ ndị Alakụba. Mana ndi ezigbo anyi choro ka ha nwee okwukwe. Mana onye maara etu esi agụ anya mmiri nwere Akwụkwọ Nsọ na iwu.
Ọ nwere Onye ọbịa karịrị Jizọs n’ụlọ gị?
Were Bible. Womenmụ nwanyị Italiantali niile nwere akpa mara mma, debe Bible, gụọ ya n'oge izu ike. Mepee ma gụọ: Jizọs na-eso gị.
EGO NA-EGO KAR BENR BEN BENBEDRED AHED BEDR.
Were Rosary soro gị. Nwaanyị anyị siri ọnwụ na onye ọ bụla weta ihe ndị bara uru. Na mbu, aghọtaghị m ihe kpatara Rosary na-agọzi na nnukwu ọdịiche ya na onye na-abụghị ngọzi, mgbe ahụ ihe a mere m ... onye ụkọchụchụpụ na Haiti bịara leta m na onye a tụrụ mkpọrọ ọnwa atọ maka ihe ijuanya. Ala nile raara onwe ya nye Setan. Ha chọrọ ịmanye ya ị drinkụ ọbara na mgbe ụkọchukwu ahụ jụrụ, ha tụrụ ya mkpọrọ. Mgbe ọnwa atọ site n’aka gọọmentị America, enwere onwe ya ma chụpụ ya.
Onye ozi ala ọzọ bịara ugbu a iji kelee Nwanyị nwanyị anyị na Medjugorje. Ọ kọkwaara m na tupu m erute n'obodo nta ahụ, onye ụkọchukwu etinyela ihe nrite na Rosary gọziri agọzi. Ọkachamara ahụ dọrọ aka ná ntị na onye ozi ala ọzọ ahụ nwere ihe nwere anwansi n’akpa ya.
Onye ọ bụla kwuluru Kraist ma tụọ ụkọchukwu mkpọrọ. Nwaanyị anyị kwuru na a na-anwa ndị niile na-abịa Medjugorje n'oge. Ihe ojoo di na anyi aghaghi imeri ihe ojoo a ma oburu na Jisos na Nwanyi anyi nonyere anyi. Omenala anyị na-eduga anyị itinye mmiri dị mma n'ụlọ anyị, na mgbe otu onye n'ime ezinụlọ na-apụ, ọ na-a thatụ mmiri ahụ wee gosi na ya onwe ya na-ekwu: "Jizọs, M na-aga ụwa, chebe m!". Mgbe anyị laghachiri: "M banye, mana tọhapụ m n'ihe ọjọ." Mmiri a gọziri agọzi abụghị anwansi.
Nke gara aga Post Gara aga post:Mgbe ihe mberede mechara ọ sịrị "ahụrụ m Jizọs, ndụ anaghị agwụ n'ụwa a"
Next Post → Post ozo:Na Julaị a na-echeta Togba a ma ama: ndụ ya na Churchka